Command Line အား စတင်လေ့လာခြင်း - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Command Line အား စတင်လေ့လာခြင်း
Linux အကြောင်း မရေးတာကြာပြီ - အရင်ရေးပြီးသားတွေတောင် မပြီးသေးတာတွေလည်း ရှိပါသေးတယ် - ဒါပေမယ့် စိတ်မပါသေးတာကို ဖြစ်ညှစ်ရေးတာထက် စိတ်ဝင်စားတာလေး လေ့လာတွေ့ရှိထားတာလေးကို အရင်ရေးတော့ စာဖတ်သူ အတွက်ရော - ကိုယ့်အတွက်ပါ အကျိုးရှိနိုင်မယ်လို့ ယူဆမိတဲ့ အတွက် ဒီ Linux မှာ အရေးပါတဲ့ Command Line အကြောင်း လေး အစပျိုးဖြစ်လိုက်ပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် Linux geek တစ်ယောက်နီးပါး ဖြစ်လာဖို့ စိတ်ကူးယဉ်မိတယ် - ဒါပေမယ့် Command Line နဲ့ မယဉ်ပါးဘူး - Command Line ကို ဘယ်လိုသုံးရကောင်းမှန်းလည်း မသိဘူး - ဒီလို ဖြစ်နေပါသလား ?? ဒါဘာကြောင့်လဲဆို ကျွန်တော်တို့တွေ Command Line ကိုလေ့လာဖို့ အတွက် လွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုရှိပါလား ဆိုတာ မသိနိုင်ခဲ့သေးလို့ပါ။ ယုံချင်လည်း ယုံမယ် - ယုံချင်မှလည်း ယုံမယ် - တကယ်တမ်းတော့ Command Line ကို အသုံးပြုရတယ် ဆိုတာ GUI tools ကို သုံးရတာထက် ပိုပြီး လွယ်ကူပါတယ်။ ဒါ့တင်မက စိတ်ဝင်စားတယ်ဆို ကျွန်တော်တို့နဲ့ အကျွမ်းဝင်လှတဲ့ Google Apps ကိုတောင် Command Line ကနေ အသုံးပြုလို့ ရနေပါပြီ -
ဒါပေမယ့် Command Line ဆိုတာ ဘယ်လောက်ပဲ လွယ်ပါတယ် လို့ဆိုဆို ပုံမှန်လမ်းရိုးကြီး အတိုင်း စတင်လေ့လာမယ့် သူတစ်ယောက်အတွက် ခက်ခဲမယ် ဆိုတာလည်း အမှန်ပါပဲ - ဒီအခက်အခဲကို အထိုက်လျောက် ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ အတွက် နည်းလမ်း ကောင်းတစ်ခု အကြံပြုကြည့်ချင်ပါတယ်။ အဲတာကတော့ CLIcompanion ဆိုတဲ့ Program တစ်ခုပါပဲ။ အဲ့ဒီ Program က ဘာကောင်းလဲဆို ကျွန်တော်တို့အတွက် လေ့လာဖို့ ခက်ခဲနေတဲ့ Command Line ကို လေ့လာတဲ့ နေရာမှာ ပုံမှန်လေ့လာ ရတာထက် ပိုပြီး လွယ်ကူအောင် ဖန်တီးပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီ Program နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး Ubuntu သမားတွေ မဖြစ်မနေ လေ့လာသင့်တဲ့ ဆိုဒ်ကောင်း တစ်ခုဖြစ်တဲ့ OMG! Ubuntu! ကလည်း ဒီ Program ဟာ Ubuntu command line ကို လေ့လာမယ့် သူတွေ အတွက် အလွယ်တကူ လေ့လာသင်ယူနိုင်အောင် ဘယ်လို ပြင်ဆင်ပေးထားတယ် ဆိုတာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
ဒီ Program ကို သုံးမယ် ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ပုံမှန် သုံးနေကျ standard command line အစား CLIcompanion ကို ဖွင့်သုံးယုံပါပဲ - အဲလိုစဖွင့်လိုက်တာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လို စသုံးနိုင်မယ် ဆိုတာကို အသုံးပြုရလွယ်ကူစေမယ့် အညွှန်းတွေနဲ့ ဖော်ပြပေးပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ်က Command line tricks အသစ်တွေကို လေ့လာချင်သေးတယ် ဆိုရင်လည်း Linux command line နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အသုံးဝင်တဲ့ Sites တွေဆီက ဖော်ပြချက်တွေကို ကူးယူပြီး ပေါင်းထည့်ထားနိုင်ပါသေးတယ်။ Linux command line နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အသုံးဝင်တဲ့ Sites တွေကို နောက်ဆက်တွဲ ဖော်ပြပေးသွားပါ့မယ်။ လောလောဆယ်မှာ ဒီ Program ကို Ubuntu users တွေ အသုံးပြုနေတယ် ဆိုတဲ့ အနေနဲ့ပဲ အမှတ်ထားပြီး ရှေ့ဆက်သွားပါ့မယ်။
ကျွန်တော်တို့ Program ကို စဖွင့်တာနဲ့ Default အားဖြင့် အသုံးများ/အသုံးတည့်တဲ့ Commands တွေကို အရင်ဆုံး စတွေ့ရမှာပါ။ သူဖော်ပြထားတဲ့ List ကို ဟိုဒီ လျှောက်ကြည့်ရင် ဘယ် Command line ကိုသုံးပြီး ဘာလုပ်နိုင်မယ် ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ အကြမ်းဖျဉ်း နားလည်နိုင်ပါတယ်။
အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ပုံကို ကြည့်ကြည့်ပါ - မြင်ရတဲ့ အတိုင်း အသင့်ယူသုံးနိုင်တဲ့ built-in command line တွေကိုလည်း တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ သူဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်း Commands ကို ကိုယ့်ဘာသာ ကြည့်ရိုက်လို့လည်း ရသလို - တကယ်လို့ အပျင်းကြီးတယ်/နားလည်ပြီးသား - အလွတ်ရပြီးသား ဖြစ်နေတယ် ဆိုရင်လည်း GUI အနေနဲ့ပဲ Command ကို သုံးလို့ ရပါတယ်။ Command ပေါ်ကို Right-click ထောက်ပြီး ကိုယ် လုပ်ဆောင်ချင်တာကို ရွေးချယ်လိုက်ပါ။
နောက်ပြီး ကျွန်တော်တို့တွေ Command တစ်ခုခုကို တစ်ခါ ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဘာလုပ်မှာလဲ ဆိုတာမျိုးကို သူက မေးပါလိမ့်ဦးမယ်။ အဲ့မှာ ကျွန်တော်တို့ စဉ်းစားရပြီ - ရွေးချယ်စရာတွေ ပါလာပြီ - ဘယ်ကောင်ကို ရွေးလိုက်ရင် ဘာဖြစ်မလဲ ဒါလေးတွေကို ကျွန်တော်တို့ တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း လေ့လာသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါမျိုးတွေက Beginner တစ်ယောက် အတွက်တော့ တကယ်ကို အသုံးဝင်လှပါတယ်။ တကယ်လို့ လေ့လာရင်း လေ့လာရင်း Command line ရဲ့ အသုံးချနည်းလေးတွေ သိလာပြီဆို Programs လေးတွေလည်း ထပ်ပေါင်းဖြည့်ချင်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုဆိုလည်း မခက်ပါဘူး -
စိတ်ကြိုက် Command များ ဖြည့်သွင်းခြင်း
Ubuntu မှာ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် Software လေးတွေ ထပ်ဖြည့်ရတာ လွယ်ပါတယ်။ File > Add Command ကို ခေါ်လိုက်ရင် အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်း Window တစ်ခုကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
Command အပါအဝင် လိုအပ်တဲ့ တစ်ခြား အချက်အလက်ဘေးတွေ ဖြည့်သွင်းပြီး Description နေရာမှာ နားလည်လွယ်နိုင်မယ့် Command နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ဖော်ပြချက်လေး ဖြည့်သွင်းပေးပါ။ ဒါ့အပြင် Command နဲ့ တွဲပြီး ရှင်သန်လာမယ့် input နေရာမှာ လည်း ဘာရိုက်ရမယ် ဆိုတာ သိသာစေမယ့် ဖော်ပြချက်မျိုး ရေးသားပေးပါ။ ဒီလိုလုပ်ဆောင်ထားမှ နောက် တစ်ကြိမ် ဒီ Command ကို အသုံးပြုတဲ့ အချိန်မှာ ဘာကြောင့်သုံးတယ် - ဘာအတွက် သုံးတယ် ဆိုတာကို နှစ်ခါပြန် စဉ်းစားစရာ မလိုပဲ နားလည် လွယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖော်ပြပါ အတိုင်း Command တစ်ခုကို Create လုပ်ပြီးတဲ့ အခါ ဒါကို ကျွန်တော်တို့ စသုံးနိုင်ပါပြီ။ ကိုယ်ဖန်တီးထားတဲ့ Command ကို စဖွင့်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ အောက်ပါအတိုင်း မြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ဖော်ပြချက်အတိုင်း တွေ့ရတော့ ငါ packages နာမည် ရိုက်ရမှာပါလား - ငါ install လုပ်ချင်တာ ဘာများလဲ ဆိုတာ အလွယ်တကူ နားလည် သိရှိနိုင်ပြီး သုံးရတာလည်း ပိုပြီး မြန်ဆန်လာပါလိမ့်မယ်။ လောလောဆယ် အခြေအနေမှာ ဒီလို Custom Command ဖြည့်သွင်းပုံကို ဖတ်ပြီး ငါက Command နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဘာမှမှ မသိသေးတာ ဘယ်လိုလုပ်ဖြည့်တတ်ပါ့မလဲ လို့ စိတ်ထဲ ခံစားရကောင်းလည်း ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ မပူပါနဲ့ - သူဖော်ပြထားတဲ့ Default commands တွေကိုသာ ဘယ်ကောင်က ဘယ်လိုသုံးတယ် ဆိုတာ အရင် သိရှိနိုင်ဖို့ လေ့လာကြည့်လိုက်ပါ။ နောက်ပိုင်းမှာ ဒီ့ထက်ပိုပြီး နားလည်လာပါလိမ့်မယ်။
ဖော်ပြချက်တွေကို ဖတ်ရှုပြီးလို့ CLIcompanion ကို လိုချင်နေပြီ ဆိုရင် CLIcompanion ရဲ့ LaunchPad page ကို သွားလိုက်ပါ။ အဲဒီမှာ install လုပ်ဆောင်ရ လွယ်ကူတဲ့ DEB file ကို ရယူနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ Terminal ထဲကနေ install လုပ်ချင်တယ် ဆိုရင် အရင်ဆုံး Applications -> Accessories --> Terminal ကိုသွားပြီး အောက်ဖော်ပြပါ Command line နဲ့ CLI Companion PPA ကို အရင် ပေါင်းထည့်လိုက်ပါ။
CLI Companion PPA ကို ပေါင်းထည့်ပြီးသွားရင် နောက်တစ်ဆင့် အနေနဲ့ အောက်ဖော်ပြပါ Command ကို အသုံးပြုပြီး CLI Companion ကို install လုပ်ဆောင်လိုက်ပါ။
တစ်ခုရှိတာ ဒီ program က Ubuntu users တွေ အတွက်ပဲ အသုံးပြုရ လွယ်ကူစေဖို့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက် ထားတာ ဖြစ်ပြီး Fedora တို့ SUSE တို့ စသဖြင့် တစ်ခြား Distros သမားတွေအတွက် ဘာမှ ဖော်ပြထားချက် မရှိသေးပါဘူး - အခု ဖော်ပြခဲ့သလောက်ဆို CLIcompanion ရဲ့ အသုံးပြုပုံ အသုံးဝင်ပုံ တစ်ချို့ကို နားလည်နိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။ နောက်တစ်ဆင့် အနေနဲ့ အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အတိုင်း Linux command line နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အသုံးဝင်တဲ့ Sites တွေ အကြောင်း အကျဉ်းချုံး မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါသေးတယ်။
လေ့လာသင့်သော Websites များ
- LinuxCommand - LinuxCommand ဟာ Command Line ကို စတင်လေ့လာသူ တစ်ယောက် အတွက် ဘယ်လို အသုံးပြုနိုင်မယ် ဆိုတာ ဖြည်းဖြည်းချင်း သင်ပြပေးပါတယ်။
- O’Reilly’s Linux Command Directory - သူကတော့ Reference guide သဘောမျိုး အသုံးဝင်မယ့် Site တစ်ခုပါ။ သူ့စာမျက်နှာမှာ ဆိုရင် built-in commands တွေတင်မက တစ်ခြား Linux distributions အားလုံးအတွက်လည်း အသုံးဝင်မယ့် အရာတွေ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Beginner သာမက advanced users တွေအတွက်ပါ လေ့လာနိုင်သလောက် အသုံးဝင်ပါတယ်။
- The Linux Cookbook - သူကတော့ လေ့လာရင် လေ့လာနိုင်သလောက် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ဖော်ပြထားတဲ့ နေရာပါ။
- Commandlinefu - သူကတော့ Command line နဲ့ ပတ်သတ်လာရင် ဟင်းလေးအိုးကြီး တစ်အိုးလိုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် စတင်လေ့လာသူ တစ်ယောက် အတွက်တော့ လေ့လာဖို့ အခက်အခဲ ရှိနိုင်ပါတယ်။
- ss64.com - သူကတော့ Database and Operating Systems နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ Command line reference ပါ။
- IBM - သူကတော့ LPIC ( Linux Professional Institute Certification ) အတွက် ပြင်ဆင်ထားတဲ့ tutorials ကောင်းတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ Site တစ်ခုပါ။
ဒီအကြောင်းအရာကို နည်းပညာအကြောင်းတွေ ရေးသားရာမှာ တောက်တိုမယ်ရာကနေ စပြီး ကြီးကြီးမားမားထိ စေတနာထား ဖော်ပြပေးနေတဲ့ Makeuseof.com ကနေ ဖတ်ရှုပြီး လိုအပ်နေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ပေါင်းစပ်ဝေမျှ ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် အရင်တုန်းက ရေးခဲ့ပြီးတဲ့ အကြောင်းအရာတွေမှာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ရေးခဲ့တာတွေလည်း ရှိသလို - တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန် ဖော်ပြခဲ့တာတွေ - ဖတ်ပြီး ဖတ်ရှုနားလည်တာကို ကိုယ်နားလည်ထားတာတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ရေးသားခဲ့တာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ တတ်နိုင်သမျှ ဖတ်ခဲ့တာတွေကို မျှဝေချင်ပေမယ့် ကျွန်တော် ထင်သလောက် အချိန်မပေးနိုင် ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် နောက်ပိုင်း ရေးသားသွားမယ့် အကြောင်းအရာတွေမှာ အကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သတ်နေတဲ့ မူရင်း Website - နောက် ဆက်စပ်လေ့လာ နိုင်မယ့် Sites တွေကိုပါ ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးသွားပါ့မယ်။ ဖော်ပြပေးမယ့် နေရာတွေကို သွားရောက်ပါ - လေ့လာကြည့်ပါ - လေ့လာမိတာတွေကိုလည်း နားလည်သလောက် တစ်ခြားသူအတွက် ဖိုရမ်မှာ ပြန်လည်ဝေမျှပေးကြပါ။ ဒီလို တစ်ယောက် တစ်လက် နဲ့ တစ်တပ်တစ်အား ကူကြရင် များမကြာခင်မှာ ကျွန်တော်တို့တွေ ဒီ့ထက်မြင့်မားတဲ့ စွမ်းရည်တစ်ခုကို ဆုပ်ကိုင် နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်။
အားလုံး လေ့လာနိုင်သလောက် မျှဝေနိုင်ကြပါစေ
ဒါကတော့ အပျင်းပြေ နားထောင်ဖို့ သီချင်းပါ
Last edited by KznT; 22-10-2010 at 05:00 PM..
ဇာနည်မောင်, မျိုးဟန်ထက်, သန့်ဇင်ဌေး, ဇော်ရဲပိုင်, ဖေယျာထက်, 99p0is0n, bonge, hellboy, ko lin, ko myo, Ko-Naing, kyaukphyu, lu soe, mickelnge, openeyes, PyaitSone, sAnDViper, thureinsoe, tu tu, yawnathan
ပြန်စာ - Command Line အား စတင်လေ့လာခြင်း
Linux တော့လုပ်ဖြစ်မလားတော့မသိဘူးဗျာ...သီးချင်းလေးကကောင်းလို့ဒေါင်းလိုက်ပြီ အကိုရေ...ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...:)
Find More Posts by စော်ကြည်ဖြူ
window command တွေအများကြီးတင်ပေးထားတာ ကျွန်တော်သိတာလေးတွေတောင်
တင်စရာမလိုတော့ဘူး။ တင်ပေးထားတဲ့လူအားလုံးကို ကျေးဇူးပါဗျာ။
Linux မှာသုံးတဲ့ command တွေကို သိတဲ့လူများရှိရင်လည်းတင်ပေးကြပါအုံး။
ကျွန်တော် Linux မှာသုံးတဲ့ command နည်းနည်းပဲသိလို့ပါ။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ကောင်းပြည့် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကျွန်တော်လဲ စာရိုက်ရတာပျင်းလို့ command သိပ်မသုံးဖြစ်ဘူး။
Directory တွေ သွားတဲ့ နေရာသုံးပါတယ်။
ဥပမာ - Downloads folder ထဲ သွားချင်ရင်
တခြား file system ထဲက foler တွေကို သွားချင်ရင်
Home folder ကို ပြန်သွားမယ်ဆို
ကိုယ် ဘယ်ဖိုဒါထဲ ရောက်နေမှန်း မသိရင် သုံးပါတယ်။
ဖိုဒါမှာ ဘာဖိုင်တွေ ရှိလဲ သိချင်ရင် သုံးပါတယ်။
cd command နဲ့ တွဲသုံးတတ်တယ်။ ဥပမာ
hidden files တွေကိုပါ ပြစေချင်ရင် သုံးပါတယ်။
list format နဲ့ ပြစေချင်ရင် သုံးပါတယ်။
hidden files ကို list လုပ်စေချင်ရင် သုံးပါတယ်။
ls -al နဲ့ တူပါတယ်။
file ကို executable ဖြစ်စေချင်ရင် သုံးပါတယ်။ အရင်ဆုံး ဖိုင်ရှိတဲ့ directory ကို သွားပါတယ်။
chmod +x adobe.bin
4. ps axu
run နေတဲ့ process သိချင်ရင် သုံးပါတယ်။
| pipeline နဲ့ တွဲသုံးတာပါ။
grep က firefox ပါတဲ့ နာမည်ကို ရှာပေးပါတယ်။
ps axu က ထွက်လာတာကို | နဲ့ ဆက်ပြီး firefox နာမည်ကို grep က ရှာပေးပါတယ်။
flash cache ရှာတဲ့ နေရာမှာ ကျွန်တော် သုံးပါတယ်။
ps axu | grep flash
file -L နံပါတ်
cp နံပါတ် ~/Videos
run တဲ့ process ပါပဲ။
process ကို ရပ်ချင်ရင် သုံးပါတယ်။ သိပ်မသုံးဖြစ်ပါဘူး။
arai2 command line download manager သွင်းထားရင် သုံးလို့ ရပါတယ်။
parallel download 16 ခုထိ လုပ်နိုင်တာမို့ တော်တော် မြန်ပါတယ်။
command line မို့ system resource နည်းပါတယ်။
aria2c -x16 "url"
url မှာ ဖိုင်လင့်ပါ။ များသောအားဖြင့် browser addons နဲ့ ဒေါင်းလုပ်လင့် ယူပြီး ဒေါင်းတာများပါတယ်။
တခါတလေတော့ 16 လုံးမရပါဘူး။ Host ကို မူတည်ပြီး -x4 စသဖြင့် လျှော့တန်လျှော့ရပါတယ်။
ဒေါင်းလုပ် tool ပါပဲ။ ပုံမှန် browsing လုပ်ရင်း ဒေါင်းလုပ်လုပ်ချင်ရင် aria2c အစားသုံးပါတယ်။
package management အတွက် သုံးပါတယ်။
repositories lists ကို update လုပ်ဖို့ သုံးပါတယ်။
software update လုပ်ဖို့ သုံးပါတယ်။
upgrade နဲ့ update မဖြစ်တဲ့ kernel လိုမျိုး update လုပ်ဖို့ သုံးပါတယ်။
file install လုပ်ဖို့ သုံးပါတယ်။
broken package ဖြစ်ရင် သုံးပါတယ်။
သွင်းထားတဲ့ software မရှိပဲ ကျန်နေတဲ့ မလိုတော့တဲ့ ဆော့ဝဲ ဖယ်ထုတ်ချင်ရင် သုံးပါတယ်။ ကျွန်တော်တော့ မသုံးပါ။ နောင်သုံးလို့ ရအောင်ပါ။
sudo apt-get install --print-uris package_name
download link ပဲ လိုချင်ရင် သုံးပါတယ်။
sudo apt-get install --no-install-recommends package_name
recommended package မလိုချင်ရင် သုံးပါတယ်။ ဆော့ဝဲက KDE, xfce, lxde မတူရင်တော့ မသုံးသင့်ပါ။
10. sudo add-apt-repository ppa:name
ppa ထဲ့ချင်ရင် သုံးပါတယ်။
deb ဖိုင် သွင်းချင်ရင် သုံးပါတယ်။
ဖိုဒါထဲက deb files အကုန်သွင်းချင်ရင် သုံးပါတယ်။ dependency error တက်ခဲ့ရင် sudo apt-get -f install လိုက်ရပါတယ်။
12. apt-cache search search_term
package name မသိရင် သုံးပါတယ်။ ဥပမာ - flash သွင်းချင်ရင်
restart လုပ်ရင် သုံးပါတယ်။
process hang ရင် သတ်ချင်ရင် သုံးပါတယ်။
15. sudo bleachbit
bleachbit ကို run ချင်ရင် သုံးပါတယ်။ GUI mode က အကုန်မပါလို့ပါ။
16. sh or ./
bin လိုမျိုး ဖိုင်ကို run ချင်ရင် သုံးပါတယ်။ အရင် executable ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးရပါတယ်။
clam av - antivirus ကို update လုပ်ချင်ရင် သုံးပါတယ်။
18. gtk-redshift -l 55.7:12.6
redshift သုံးလို့ gui mode ၀င်လို့ မရရင် သုံးပါတယ်။ 12.10 မှာပါ။
19. man or --help
command မသိရင် သုံးပါတယ်။
20. gedit / leafpad
nautilus / pcmanfm / thunar
sudo gedit file_name
sudo nautilus /usr/share/
သုံးတာများတဲ့ application ပါ။
Tab - command အပြည့်မရိုက်ရပဲ အလိုလို ဖြည့်ပေးပါတယ်။
q - quit လုပ်ပေးပါတယ်။
Ctrl + c - cancel လုပ်ပေးပါတယ်။
Shift + Ctrl + C / v - copy, paste ပါ။ Shift တစ်ခု ပိုပါတယ်။ ကိုယ့်ဟာကို ပြင်လို့တော့ရပါတယ်။
ကျန်တာတော့ GUI ပဲ သုံးတာများပါတယ်။
Last edited by g00gle; 15-10-2012 at 04:44 PM..
ကောင်းပြည့်, မောင်သံသရာ, 99p0is0n, bagothar85, Ko-Naing, KznT, soehtetpaing, tu tu
Windows7Libraries အား မှန်ကန်စွာ အသုံးချခြင်း KznT Windows နှင့်သက်ဆိုင်သော010-03-2010 03:41 AM